Hevitra MPANOHARIANA | Aprily 2007
Ambany izany ny gasy?
2007-04-18 @ 06:54 in Kolontsaina
Nisy zavatra iray nahasorena ahy tsikaritro tamin’ny vaovao. Nisy fihetsiketsehana ara-kolontsaina izay notontosaina tao amin’ny Alliance française. Ny tena fitadidiako azy moa dia momba ireo mpanoratra malagasy amin’ny teny frantsay no tena naranty tao Andavamamba io. Samy manana ny aingam-panahiny tokoa ka tsy misy azo sakanana amin’izany na hanoratra amin’ny teny frantsay na hanoratra amin’ny teny malagasy. Ny mpanoratra amin’ny teny malagasy moa dia amin’ny mpiteny malagasy ihany izy no malaza raha tsy hoe misy mandika amin’ny teny vahiny malaza angaha ny asa-sorany. Ny mpanoratra amin’ny teny vahiny be mpiteny kosa dia malalaka kokoa ny tsenany ary ho betsaka kokoa ny mahafantatra azy.
Tsy dia any loatra aloha ny resako amin’izao fotoana izao. Tsy nankany an-toerana tsy akory aho fa ny hitako tao anaty vaovao ihany no ampitaiko etoana. Tsy voatery hoe latsaky ny iray minitra ny sary nampitaina tao anaty vaovao dia tsy hahita na inona na inona ihany koa. Fa inona loatra ary ilay hita ? Rehefa miresaka mpanoratra amin’ireny fampirantiana ireny dia afisy lehibe no ametrahana ny mombamomba azy tsirairay avy. Firenen-dehibe no mikarakara ny ranty ka tsy ho kitoatoa ny endriky ny afisy aseho ny mpijery amin’izany. Amin’izay fampirantiana mahafinaritra ny maso izay no misy ny indrokely na indrobe mahatohina ny olona toa anay indrindra indrindra.
Sary telo matetika no hita isaky ny afisy iray. Ny sarin’ilay mpanoratra aloha voalohany indrindra, ny sarin’ny Tour Eiffel hatrao ambaniny na fanambaniny na hatrety antokontaniny faharoa ary ny sarin’ireo zavatra manintona eny amin’ny rovan’i Manjakamiadana ny fahatelo. Ao ny sarin’ny tranovola, ny sarin’ny voromahery eo amin’ny vavahadin’ny rova, ny sarin’i Besakana (tranon’Andrianampoinimerina ho an’izay tsy mahalala) ary ny tranovato rova na fiangonana ihany koa aza. Ireo endrika fahatelo ireo izany no heverina ho mahamalagasy ny Malagasy. Hatreo aloha dia tsy misy ny olana.
Fa ny toerana ametrahana ny sary isaky ny afisy no saiky mitovitovy avokoa ary ametrahako olana. Ny sarin’ny mpanoratra eo ankavia tsy maninona loatra. Ny sary roa farany dia eo ambony ka ny sarin’i Tour Eiffel no ambony indrindra ka io no manaloka « ho ambany elany » ny sary tsirairay amin’izay hita ao amin’ny rovan’i Manjakamiadana. Io ilay endrika nanaitra ahy. Mpikambana ao amin’ny francophonie tokoa ve isika dia ao ambany elatry Frantsa avokoa izay rehetra mpikambana ao aminy indrindra fa ny kolontsaina ? Tsy toerana mitovy intsony izany no misy ny tsirairay fa misy ny patabe (Patirao)? Hanao ahoana re ny fihevitry ny manampahefana malagasy mahita izany ? eny fa na dia ny eritreritry ny mpiasa ao amin’ny Alliance française aza dia mba tiako ho fantatra ihany koa. Mety ho ao anatiny loatra koa ry zareo ka tsy mahatsapa izay mety hahatohina ny hafa izay mety ho vitsy an’isa tahaka ahy izay manoratra.
Mety ho tsy zanatany intsony tokoa isika fa mbola zanatsaina ihany raha tsy nahatsikaritra izany izay nitsidika io fampirantiana momba ny mpanoratra malagasy amin’ny teny frantsay io. Raha nankany aho ka misy ilay boky volamena mipetraka eo amin’ny fivoahan’ny efitra fampirantiana iny dia ho nosoratako izao hevitra nabosako taminareo izao.